:: My Little World ::: June 2006
စိတ်ကုန်တယ်.. တကယ်ပါပဲ.. အိမ်ပြန်ခါနီး Email လေးကြည့်လိုက်အုံးမှဆို ပြီးကြည့်လိုက်တာ.. စိတ်ကိုပျက်သွားတာပဲ။ ..ထင်တော့ ထင်နေတယ်.. လခမှန်နေတာ ၂ လ ရှိနေပြီဆိုတော့ ဘယ်တော့များ ထ ဖောက်မလည်းလို..။ခုတော့ဗျာ.. မနက်ဖြန်ရောက်ရင် လခ လေးရတော့မယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာနေတာလေးတော့ ပျက်သွားပါပြီ... ။ CEO က Email ပို့ တယ် လခ နောက်ကြမယ်တဲ့... လကုန်ရက်မှာ လခမရ တာလောက်စိတ်ကုန်တာမရှိဘူး။ တစ်လ လုံးပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ထားရတာ လကုန်တာနဲ့ ချက်ချင်း လခရမှကြိုက်တယ်...တော်ပြီ .. အလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလား မတင်မကျ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတာကို ခုတော့အတည်ပြုလိုက်တော့မယ်.. စောင့်နေတာလေး တစ်ခု သိရပြီးရင်တော့ အလုပ်ထွက်စာတင်တော့မယ်.. ထွက်စာတင်ပြီးရင်တောင် ဒီမှာ ၂ လဆက်လုပ်ရအုံးမှာ.. အနည်းဆုံး ဒီမှာ ၃လလောက်တော့ ဆက်လုပ်ရအုံးမှာပဲ..
Posted by Nay Nay Naing at 6/30/2006 10:00:00 AM6comments
I Am So Talkative
စကားမပြောပဲနေုပြန်ရင်လည်း စိတ် ကြီးပဲလို့ ပြောအုံးမယ်...
ငါကပဲ တစ်ခုခုဆို အထိန်းအချုပ်မရှိ တရားလွန် ဖြစ်နေတာလား...
စကားပြောရင်လည်း အလွန်ပြော..မပြောရင်လည်း တေမိ လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်နဲ့ တူတယ်..
ငါကလည်း စိတ်ထဲရင်းနှီးရင် စကားပြောလိုရတယ်.. ပြောစရာစကားတွေ အလိုလိုရှိလာတယ်..
မဟုတ်ရင် ဘာစကားမှ ထွက်မလာဘူး.. "အ" နေတဲ့သူလိုပဲ.
ဒါမကောင်းဘူး လို့သူကပြောတယ်..။ အင်း.... မေမေကလည်း ပြောဘူးပါတယ်..
ဟုတ်တယ် တော်တော်မကောင်းတဲ့ အကျင့်ကြီးပဲ..
အစက ငါ ဒီလောက် သတိမထားမိဘူး..
ငါမှာက သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ကလည်းနည်းတာကို..
ရှိတဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ ဟာတွေကလည်း ငါ့စိတ်ထဲရင်းနှီးလို့သူငယ်ချင်းဖြစ်လာသူတွေကြီးပဲကို..
သူတို့ တွေနဲ့ တော့ ငါမှာပြောစရာက အမြဲရှိနေတော့.. ငါ့ ကိုယ်ငါ သတိမထားမိတာ ဘာဆန်းသလဲ။
အရင်ကတော့ မရင်းနှီးရင်စကား မပြောပဲနေတာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့်
ခုတော့ မနေသင့်တော့ဘူတဲ့ ၊ လူမှုရေးဆိုတာကြီးကရှိတယ်လို့ ပြောတယ်..
လူဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေနဲ့ မှ စကားပြောမယ်..အပေါင်းအသင်းလုပ်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ..
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျှောညီထွေနေတက်ရမယ်. စကားပြောတတ်ရမယ်..ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ရမယ်...
အို... စုံနေတာပါပဲ.. သူပြောတာတွေ မ မှားဘူး ။ အမှန်တောင် လွန်နေသေးတယ်...
ငါဟာ တကယ်ပဲ ပြောသင့်တဲ့နေရာမှာ မပြောပဲ..
တစ်ခါတစ်လေတော့ (မပြောသင့်တဲ့နေရာမှာ) အရမ်းစကားများတဲ့သူ ဖြစ်နေတာပဲ..
အင်း...ဒါတွေကြောင့်လည်း ငါမှာ အပေါင်းအသင်း မများတာ.. ဘာမှမဆန်းပါဘူး..
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စတွေ့ ကြတယ်.. တစ်ယောက်က စကား မပြောပဲ တေမိလုပ်နေရင်..
တစ်ခွန်းမေး တစ်ခွန်းဖြေလုပ်နေရင်..သူတို့ နှစ်ယောက်.. အပေါင်းအသင်းဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား။
ကိုယ်က ဖော်ဖော်ရွေရွေ စကားပြောပါလျှက်.. ဟိုဘက်က တုံန့် ပြန်ပုံက တစ်မျိုးဆို.. ဘယ်လိုနေမလဲ။..
ဆက်ပြီးစကားပြောချင်ပ မလား။ မပြောမဲ့သူက ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်တော့ရှိမှာပဲ..
ငါသာသူတို့ နေရာမှာဆိုလည်း ဆက်ပြီးစကားပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး..။
လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ..မလွယ်ပါလား ..
လူဆိုတာတစ်ယောက်တည်းနေလို့ မရတော့လည်း ကြိုးစားပြောင်းလဲကြည့်ရမှာပေါ့လေ..
ဒါက ငါစကားမပြောတဲ့ အကြောင်း..
အဓိကပြောချင်တာက ငါစကားများတဲ့အကြောင်း ၊ အဲ့လိုပဲ တစ်ခုခုဆို လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး...
ငါ စကားများတယ်..မှန်ပါတယ်. ငါရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ ဆိုရင်..
အထူးသဖြင့် သူနဲ့ ဆိုရင်..သူဟာ ငါ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူတစ်ယောက်ပဲလေ..
သူလည်း ဘယ် အချိန်တိုင်းတော့ ငါစကားတွေနားထောင်ပေးနေနိုင်မလည်း..
ဒါတောင် သူရဲ့ အချိန်တော်တော်များများ ငါနဲ့ ရှိပေးနေတာပါပဲ...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ငါလွန်တာပါ..အားတာနဲ့ သူကိုရှာပြီ..
တစ်ခုခုဆို သူကိုပြောပြလိုက်ရမှ... ရှိသေးတယ်..
ငါကတစ်ခုခုပြောရင် ပြန်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုတော့တုံန့် ပြန်မှကြိုက်တယ်..
သူကလည်း စကားကို သူစိတ်ကုးပေါက်မှ ပြောတဲ့သူ..
သူက စကားနည်းလေ.. ငါကစကားပိုများလေနဲ့(သူနဲ့ ဆိုရင်) တူပါရဲ့..
တို့ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ပြောအုံးမှပေါ့..(ကိုယ့်အထင်ပါ)
တစ်ခါတစ်လေ သူလိုပဲ ငါလည်းစကားနည်းနည်းပဲပြောမှလို့ ..
ခုထိတော့ မအောင်မြင်သေးပါဘူး...ဘယ်အောင်မြင်ပ မလည်း..
ငါက စကားလုံးဝမပြောပဲနေရင် သူလည်းကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး.. (မယုံရင် မေးကြည့်ပါ)
ငါသာ သူလိုလိုက်နေလိုက်ရင်. ငါတို့ နှစ်ယောက်အကြား စကားရှားသွားတော့မှာပေါ့
အင်း... ငါ အစွန်းမရောက် အလယ်အလတ်နေတတ်အောင်တော့လုပ်အုံးမှ...
ကြိုးစားအုံးမှ..သူကိုသနားလို့ ပါ.. သူကလည်းသူပါပဲ..
ငါက သူတစ်ယောက်ကိုမှ ထူးထူးခြားခြား လွန်ကဲစွာ စကားများများပြောတဲ့ အတွက် သူဂုဏ်ယူသင့်တယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 6/29/2006 02:56:00 PM0comments
ဒီနေ့mayvelous ရဲ့ ဘလောခ့်မှာ ရေးထားတာလေးဖတ်မိရင်း စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေးတွေချရေးကြည့်တာပါ။.. သူပြောထားသလိုပါပဲ.. မြန်မာလို ဘလောခ့်ရေးရတာ ကျွန်မအတွက်လည်း တော်တော်မလွယ်တဲ့အရာပါ။ တော်တော်လေးအချိန်ယူ အားတင်းခဲ့ရတာပါ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကျွန်မက မြန်မာစာ အရေးအသား အသုံးအနှုံး စားလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အရမ်းညံ့ပါတယ်။ မြန်မာစာမှညံ့သလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ English စာလည်းတော်တော်လေးညံ့ပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ ရင်းနှီးသူတော်တော်များများသတိထားမိကြမှာပါ။ နောက်မှပဲ English စာမှာ အပြောအဆို အရေးအသားလျှော်လွန်းလို့ တက်ရတဲ့ ပြဿနာတွေရေးပါအုံးမယ်။ ခုတော့ မြန်မာစာအကြောင်းဆက်ရေးလိုက်အုံးမယ်။...
ကျွန်မ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း မပျက်မကွက်လုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ မြန်မာဘလောခ့်တွေလိုက်ဖတ်တဲ့ အလုပ်ကထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့အထဲမှာပါ ပါတယ်။ မအားလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်ယူဖတ်ဖြစ်ပါတယ်..။ ခုတလောတော့ မြန်မာဘလောခ့်အားလုံးနီပါး ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဖတ်ရတာ အတော်ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မ ပထမဆုံး ဖတ်မိတဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဘလောခ့်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘလောခ့်ပါ။ အစကမြန်မာလိုရေးတဲ့ ဘလောခ့်တွေရှိမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ အစ်ကိုငြိ်မ်းချမ်းက သူ ဘလောခ့်မှာမြန်မာလိုရေးထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်မိတာ မြန်မာလိုရေးထားတာ ဖတ်ရတာ တော်တော်လေးသဘောကျသွားမိတာပါ။ အဲ့ဒီကစပြီး ကျွန်မ မြန်မာလိုရေးတဲ့ဘလောခ့််တွေကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်မ အရင်ကတည်းက English လိုရေးထားတဲ့ ဘလောခ့်တွေဖတ်လေ့ရှိပါတယ်..။ရေးတဲ့သူတွေကတော့ ဗမာရော..တခြားနိုင်ငံခြားသားရေးတာတွေရောပေါ့ ။ တစ်ခါဖတ်မိလို့ သဘောကျရင် Favorites မှာ သိမ်းထားပြီး အားရင်သတိတရသွား သွားဖတ်လေ့ရှိပါတယ် ။ ကျွန်မသူတို့ ကို အပြင်မှာမသိသလို သူတို့ ကလည်း ကျွန်မကိုမသိပါဘူး။ ကျွန်မ သူတို့ ဘလောခ့်ကို အမြဲလာဖတ်တယ်ဆိုတာတောင် သူတို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ ဘလောခ့်တွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့သူတို့ တွေနဲ့ ကျွန်မ ..ကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးလာပါတယ်.. တချို့ ဘလောခ့်တွေဆို ကျွန်မ အမြဲဖတ်လာတာ ၂ နှစ်ကျော် ၃နှစ်နှည်းပါးရှိနေပါပြီ။ သူတို့ ဘလောခ့်မရေးတာကြာရင် စိတ်ပူမိတယ်.. ဘာများဖြစ်နေလည်းလို့ ...သူတို့ကြုံတွေရတာလေးတွေရေးရင် သူတို့ နဲ့ အတူလိုက်ခံစားမိတယ်...တစ်ချို့ ရေးထားတာဖတ်ရတာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလို၊ တစ်ချို့ ဟာကြတော့လည်း စာသင်းခန်းထဲရောက်နေသလို၊ တစ်ချို့ ဟာကြတော့လည်း ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖတ်နေရသလိုပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြောဘလောခ့်ရင်ကျေးမှုကို ကျွန်မကြိုက်ပါတယ်... ။အမြဲတမ်းလည်းဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ဒါပေမယ့် ဘလောခ့်ရေးဖို့ တော့ စိတ်ဝင်စားသလိုရှိပေမယ့် မရေးဖြစ်ပါဘူး။ English လိုထားတဲ့ဘလောခ့်တွေ ဖတ်ရတာ... နှစ်သက်ပေမယ့်.. တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ.. ရင်ထဲအထိမရောက်သလိုပဲ.. တစ်ခုခုလိုနေသလိုပေါ့။..သိပ်တော့မပြောတတ်ဘူး... ဟင်း... အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါ.. ကျွန်မ မြန်မာစာအရေးအသားညံ့ပါတယ်လို့ ။....စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေ သိတာတွေကို ကိုယ်ကိုတိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့မလွယ်သလို ကိုယ်သိတာတွေကို သူများတွေပါမျှဝေခံစားနိုင်အောင်ရေးတတ်ဖို့ ကပိုခက်တယ်ထင်ပါတယ်... ရေးတတ်ပြန်အုံးတော့ စာလုံးပေါင်း အသုံးအနှုံးမှန်ဖို့ ကလိုပြန်ရော...မလွယ်ပါဘူးရှင်.. ကျွန်မလို လူတွေအတွက်ပိုလို့ တောင်ခက်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်လည်း သူများရေးထားတဲ့ မြန်မာဘလောခ့်တွေဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်ကနေ ကိုယ်ကိုတိုင် ရေးကြည့်ချင်စိတ်ကို တာဆီးမရတော့တာကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာလိုဘလောခ့်ကို စရေးဖြစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပါပဲ။
ရေးရင်းရေးရင်း ဘာဆက်ရေးရမှန်းမသိသလို အနှောင်အယှက်ကဝင်လာပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းသောအနှောင်အယှက်အကြောင်းလည်း နောက်မှဆက်ရေးတော့မယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 6/28/2006 08:10:00 PM4comments
ဒီသီချင်းကို စနားထောင်ထဲကနှစ်သက်ခဲ့တာပါ... နားထောင်လို့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ...
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့အဲ့ဒီသီချင်းကိုပြန်နားထောင်ဖြစ်တော့ရယ်ချင်စိတ်ပဲပေါက်နေပါတယ်..
နားထောင်ရတာ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတော့တာပဲ...
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ.. မိန်းမယောင်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားနှစ်ယောက်က.. ဒီသီချင်းကို မရပဲ လိုက်ဆိုတဲ့ အခန်းက..
ကြည့်နေတုန်းက အဲ့ဒီလောက်မရယ်ရပေမယ့် ဒီသီချင်းကြားတိုင်း ရှက်ရှက်နဲ့ရယ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတောပါပဲ
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ကျွန်မက ဘယ်သီချင်းမှကောင်းကောင်းမရပါဘူး..
ခု့ တော့တွေးမိတယ်...သီချင်းစာသားမရပဲ လိုက်ဆိုမိတာ... ငါလည်း သူတို့ လို ရယ်ချင်စရာကောင်းနေမှာပဲလို့ ..
Movie : White Cicks (2004)
Posted by Nay Nay Naing at 6/27/2006 10:39:00 PM 1 comments
ဒီနေ့အလုပ်မှာ.. ခေါင်းရှုပ်ရှုပ်နဲ့သီချင်းနားထောင်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ mp3 format သီချင်းတွေလိုက်ရှာဖြစ်ပါတယ်..
အ်ိမ်မှာတော့ P2P တွေသုံးပြီးရှာနေကြမို့ လွယ်ပါတယ်..
အလုပ်မှာကြတော့ ဘာ software မှမသုံးပဲရှာရတာဆိုတော့ အချိန်ကြာပါတယ်..
တော်ကြာနင်ဘာ site တွေဝင်လို့ အကောင်ကိုက်တာလည်းဆို..ရှင်းရတာ.. မကောင်းပါဘူး..
ဒါနဲ့ စဉ်းစားမိတယ်.. ဟိုတလောက. NLS blog မှာ google သုံးပြီး သီချင်းရှာတာတွေ့ မိသလိုပဲ ရှာကြည့်အုံးမှဆိုပြီးလိုက်ရှာကြည့်တော့
ဒီ site လေးကိုတွေ့ မိပါတယ်...
ဒီမှာ Google Hacking to Locate MP3s နဲ့Google Proxy ဆိုပြီးနှစ်ခုပါ ပါတယ်..
သ်ီချင်ရှာတာပဲ စမ်းကြည့်ရသေးတယ်..နောက်ဟာတော့ ပြီးမှစမ်းတော့မယ်
မဆိုးပါဘူး တော်တော်ရှာလို့ ရပါတယ်
ဒါလေးကြောင့် ဒီနေ့ သီချင်းတော်တော်များများနားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 6/27/2006 10:20:00 PM0comments
Busy Day (25 -June-2006)
မနေ့ ကတစ်နေ့ လုံးအလုပ်ရှုပ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးကို.. မှတ်မှတ်ရရဖြစ်အောင် ရေးထားအုံးမှ..
သူများတွေအတွက်တော့ ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်တဲ့ လုပ်နေကြ ဖြစ်လောက်ပေမဲ့.. ကိုယ့်အတွက်ကတော့.. ၈နှစ် ကျော် ၉ နှစ် အတွင်းမှာ ပထမဆှံးလုပ်ကြည့်တဲ့ ကိစှုတစ်ခုဖြစ်လို့ထူးခြားနေတာပါ။ စကားကြီး စကာကျယ်တွေ ပြောနေလို့ဘာတွေနဲ့ များ အလုပ်ရှုပ်ရတာလည်းလို့တွေးမနေပါနဲ ။ ရှင်တို့ အတွက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးဘာပါ။ ကိုယ့်အတွက်ကသာ ထူးခြားနေတာပါ။ ယုံကြမလားတော့ မသိဘူး ကျွန်မ မနေ့ ကမှ Computer တစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင် format ချ ၊ OS နဲ့ တစ်ခြားလိုတဲ့ software တွေ သွင်းဘူးတာပါ။ ရထားတဲ့ ဘွဲ့ တွေအားနားပါအုံး ။ ဒီလောက်တောင်ညံ့ရလား ပြောလည်း ခံရမှာပါပဲ ။
တကယ်ပါ... အခုအကြိမ်ဟာ ပထမ ဆုံးပါ။ ဒါတောင် တစ်စုံတစ်ယောက် (ကိုယ်ပြန်မပြောရဲ တဲ့ သူတစ်ယောက်) က အတင်း မလုပ်မဖြစ်ရလေအောင် တိုက်တွန်း ဖိအားပေးမှုကြောင့် နောက်ဆှုံး လုပ်ရတာပါ။ ကိုယ်ဟာ ကိုသာဆှိ ..Computer ကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုလို့ ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေစီ ဖုန်းဆက် ..တစ်ယောက်ယောက်ကို မဖြစ်မနေအားခိုင်းပြီး လုပ်စရာရှိတာ အကုန်လုပ်ခိုင်းနေကြပါ။ ဒီလိုပဲ သူများတွေ install လုပ်ပေးတဲ့ Computer သုံးတာ Computer ကိုစသုံးထဲကပါ ။ ဘာလို့ မှန်းတော့ မသိပါဘူး ။ Computer ကို format လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့software တွေ install လုပ်ဖို့ တောင် ကျွန်မ အနေနဲ့တော်တော် ဝင်လေးပါတယ် ။ မဖြစ်မနေ ကိုယ်ကိုတိုင် install လုပ်ပါမှ ရနိူင်မယ့် software တွေကလွဲရင် တော်ရုံ လုပ်လေ့မရှိပါဘူး...။ ခုတစ်ကြိမ်တောင် ၁၅ ရက် ၊ ရက် ၂၀ လောက် မလုပ်ပဲ ရှောင်ပြေးနေခဲ့သေးတာပါ။ နောက်ဆုံး..စိတ်ဆိုးမှာကြောက်လို့ သာ မနေ့ က..မလုပ်ချင်လုပ်ချင်နဲ့ လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...ဒါတွေထားပါတော့လေ...
မနေ့ က ..ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လည်း.. ပြောရအုံးမယ်..
ပထမဆုံး အနေနဲ့စနေနေ့ ညက download လုပ်ထားတဲ့ iso file ကို CD မှာ အရင် burn ပါတယ် ။ အဲ့ဒါလည်း ..iso file ကို ဘယ်လို burn ရမှန်းမသိလို့ မေးရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ software မသုံးတတ်လို့သူပြောတဲ့ software ကို install လုပ်လိုက်ရပါတယ် ။ အဆူခံရပြီး နောက်ဆုံးတော့ CD burn လို့ ပြီးသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ computer ကို restart လုပ်ခိုင်းပြီး ရှိပြီးသား OS ကို CD သုံးပြီး format လုပ်၊ ပြီးတော့ new OS သွင်းခိုင်းပါတယ် ။ အသေးစိတ်တော့ ရေးမပြတော့ပါဘူး။... ဒီအတော အတွင်း လေး၊ငါး ခါထက်မနည်း အဆူခံ လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မ ကလည်း လွန်ကိုလွန်ပါတယ်..။သူပြောတာတွေက ကိုယ်သိပြီးသား ဟာတွေဖြစ်လို့ သူက အကောင်းနဲ့ပြောပြရင် နားမထောင်ခြင်ပါဘူး။ ကဲ.. သိနေရင်လည်း ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ဆိုရင်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ သိသာသိတယ် တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတော့ ဘယ်လုပ်တတ်ပမလဲ...။ အဲ့ဒီတော့ မလုပ်တက်တာ ကို..သေခြာမပြောပြပဲ..လုပ်ခိုင်ရမလာဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပါသေးတယ်...ကြုံတုန်းလေး ကိုယ်အကြောင်းကိုယ် ပြောပြတာပါ။.. OS install လုပ်လို့ ပြီးတော့ တစ်ခြားလိုတဲ့ software တွေ install လုပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ရာမှာလည်း ဆယ့်လေး ငါး ခါထက်မနည်းဆူခံရပါသေးတယ်...အဲ့ဒါလည်း ကျွန်မအလွန်ပါပဲ။.. download လုပ်ဖို့ website တွေပေးပါလျှက် ဘယ်မှာ download လုပ်ရမှန်း မသိလို့ ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ သူက အကောင်းဆုံးနည်းကိုတွေ့ သွားပါတယ်။ တစ်ချို့ ဟာတွေကို download လုပ်ဖို့link အတိအကျပေးပြီး ၊ တစ်ချို့ဟာတွေကိုတော့ သူပဲ download လုပ်ပြီး ကျွန်မစီကို file transfer လုပ်ပို့ ပေးပါတယ်... အားလုံးနီးပါး လိုတဲ့ software တွေ install လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကျတော့ ညနေ ခြောက်နာရီ နီးပါးရှိနေပါပြီ။ ကျွန်မလည်း စိတ်ပင်ပန်း သူလည်းအိပ်သင့်တာကြာပြီမို့ကျွန်မလည်းသူကို အတင်းအိပ်ခိုင်းပြီး installation လုပ်ခြင်အလုပ်ကို အပြီးသတ်လိုက်ပါတယ် ။ နောက်လိုတာတွေတော့ နောက်အပတ်မှ ပဲ ဆက်လုပ်တော့မယ်လေ...
ဒါတွေကတော့ မနေ့ က install လုပ်ခဲ့တာတွေပါ.
Window XP Pro (licensed version)
JAVA SDK 5.0
Partitation Magic 8.0
Alpha Win Unicode
Sound Card and Web Cam installation
ဖုန်းနဲ့ အသေးစိတ်၊ စိတ်ရှည် လက်ရှည်၊ အိပ်ပျက်ခံ ပြောပေးသူလေးကို.. အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...
Posted by Nay Nay Naing at 6/26/2006 04:54:00 PM0comments
ဝိုင်ဝိုင်း - အချစ်ငှက်
ငါအလွမ်းတွေ..နင်သိနိူင်ဖို့ .. ဒ်ီသီချင်းတွေ.. ငါလေ...အချိန်တိုင်းဆို...
အရှေ့နဲ့ အနောက် ဘယ်လိုကွာဝေးပါစေ...
မိုး နဲ့ အောက် မဆုံနိူင်လည်းလေ..
အသည်းနှလုံး တို့ တစ်နေရာထဲမှာလေ...
ဒီသီိချင်းလေး တော့ကြိုက်ပါရဲ့... ဒါပေမယ့် ဒီသီချင်းထဲကလိုတော့ အချစ်ဆုံးနဲ့မဝေးပါရစေနဲ့ ....
တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန် မဝေးတော့တဲ့ ကာလမှာ.. ဆုံဆည်းရမယ့် ယုံကြည်ထားတဲ့ အချစ်ဆုံးသူနဲ့ ..
မဆုံနိူင်သေးတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့... ဒီသီချင်းထဲက..စာသားတစ်ချို့ ကို..နှစ်သက်နေမိအုံးမှာပါ....
Posted by Nay Nay Naing at 6/24/2006 03:22:00 PM0comments
ခုတလော... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဘူးတဲ့ စကားတစ်ခုကို အမှတ်ရနေမိတယ်..
သူပြောသလို ကိုယ်ဟာတစ်စုံတစ်ခုပဲ မှားနေလား။
သူပြောတာ စကြားကြားချင်းတော့ ငါကို ပြောရက်လိုက်တာလို့ ...
ငါကိုယ်ငါတော့ အတက်နိူင်ဆုံး အကာင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်.. ထင်မိတာပဲ..
ငါ ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲ...
ခုတလော စိတ်သိပ်မရှည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်..
လုံးဝ ပြေလည်ပါပြီထင်ထားတဲ့ဟာတွေတောင်..တစ်ခုခုတော့ အစဉ်မပြေတာဖြစ်လိုက်ရမှ..
ငါကိုယ်တိုင်က အစဉ်ပြေအောင် မနေတက်၊ မလုပ်တက်တာလား...
ညဆိုလည်း ခဏခဏ လန်ု့်နိုးနေတယ်...
တစ်ခု ခုကို အားကိုးတကြီးရှာမိနေတယ်...
ဖြစ်သင့်တာတွေ သိရက်နဲ့ ငါမလုပ်နိူင်ဘူး...
သိရက်နဲ့ မလုပ်နိုင်တာ.. ငါအမှားလား...
ငါ့ကိုယ် နားမလည်ကြဘူးလို့ ခံစားရတယ်...
ငါကရော သူတို့ကို နုားလည်မှုပေးနိူင်လို့လား...
ကိုယ်တောင်မလုပ်နိူင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို.. ငါက သူများတွေစီကရချင်နေတယ်ဆိုတော့
ငါ အတ္တကြီးတယ်ဆိုတာ မှန်နေပြီလား...
က်ိုယ်ဟာကို သက်သေဖို့ကလည်း လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး..
တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ချက်ချင် သေသွားမယ်ဆို.....
စိတ်မရှုပ်ရတော့ဘူး .. စိတ်မညစ်ရတော့ဘူး...ကြောက်လန့်မှုတွေမရှိတော့ဘူး..
Posted by Nay Nay Naing at 6/23/2006 02:26:00 PM0comments
Our Life of Being Computer Guy...
1. Distrust - Can I do it?
2. Excitement - I can do it!!!
3. Astonishment - How will I do it?
4. Enthusiasm - I got hold of the flow!!!!
5. Love - I am an excellent programmer!
6. Disillusionment - Code is not functioning properly..
7. Fright - Will this logic work?
8. Horror - Anotheralevel bug!!
9. Fury - Damn with computers #@#$@^
10. Frustration - It is not working in expected manner.
11. The End - Project appraisl.
Posted by Nay Nay Naing at 6/20/2006 02:57:00 PM0comments
History of Unix Systems
Posted by Nay Nay Naing at 6/20/2006 12:43:00 PM0comments
“မင်းအတွက် ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပေမယ့် သူ့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မင်းတွေးကြည့်ဖူးသလား”
“လူတစ်ယောက်ကို သူ့စိတ်နဲ့သူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုမူဖို့ ခွင့်ပေးထားသင့်တယ်၊ သူ့စိတ်ကို အနီးကဖြစ်စေ၊ အဝေးကဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ညှို့ယူပြီး အကျပ်ကိုင်ခိုင်းစေခြင်းအားဖြင့် အဲဒီလူရဲ့ စိတ်မှာ နှောင်တည်းခံကျဉ်းကျပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ တွေဝေစေနိုင်တယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်တန်ရာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို မရဘဲ မလိုလားအပ်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်၊ ဥပမာ နောင်တ၊ ကြေကွဲမှု စသည်ဖြင့်ပေါ့”
“မိန်းမသားတွေမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါဟာ စောင့်ဆိုင်းမှုပဲ”
Posted by Nay Nay Naing at 6/19/2006 03:24:00 PM0comments
Happy Birthday Daw Aung San Su Kyi
Happy 61st Birthday Daw Aung San Su Kyi..
Posted by Nay Nay Naing at 6/19/2006 02:17:00 PM0comments
If you ask : "What is love?"
I answer : "Love is love!"
This isatruth ,
A universal truth ,
One of the greatest truth .
If you truly know this truth ,
You won't worry about love ,
And you won't argue "What is love?"
Love isaseries of happiness,
And giving each other the kindness.
Love is full of wishes and hopes ,
And the unforgettable dates and notes.
Love makes small things last ever ,
Two persons become one forever ,
A life exist on the world ,
The world more beautiful and better.
Posted by Nay Nay Naing at 6/18/2006 10:04:00 PM0comments
Come back baby please 'cause
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2006 08:16:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2006 07:40:00 PM0comments
ဒီနေ့က မောင်လေး မွေးနေ့ ပါ..
မိသားစုတဲ မှာ မောင်လေးက အငယ်ဆုံး၊ အမေ့ ရဲ့ အချစ်ဆုံးလေးပါ...
ဘာလိုလိုနဲ့မောင်လေးတောင် ၁၉ နှစ်ပြည့်သွားပြီပဲ..
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2006 11:23:00 AM0comments
ဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပဲ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီလောကင်္ကြီးမှာ..
....နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ ...
Posted by Nay Nay Naing at 6/15/2006 06:09:00 PM0comments
Perfect Pictures For An Imperfect World.
I saw that movie from NLS's blog. Thank NLS.
Posted by Nay Nay Naing at 6/15/2006 01:58:00 PM0comments
ဒေါသစိတ်လေး ၃၆၀ မိနစ်
Posted by Nay Nay Naing at 6/15/2006 11:29:00 AM0comments
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး...ကိုယ် စားချင်တာလေးမို့ .. မျှဝေခံစားတာပါ..
Posted by Nay Nay Naing at 6/14/2006 03:24:00 PM2comments
Viidoo - Home of Web TV
I got that link from one of my friend. Thank you for sharing nice link..
Posted by Nay Nay Naing at 6/14/2006 12:15:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/13/2006 10:40:00 AM 1 comments
မျိုးကျော့မြိုင် - စိတ်ညစ်နေလား
Posted by Nay Nay Naing at 6/11/2006 03:44:00 AM0comments
One of my favoutite songs
No New Year's day to celebrate,
No chocolate covered candy to give away,
No first spring, no song to sing.
In fact it's just another ordinary day.
No wedding, no Saturday within the month of June.
But what it is, is something true,
I just called to say how much I care,
No harvest moon to light, no tender August night.
No even time for birds to fly southern skies.
No Libra sun, no Halloween,
No giving thanks to all the Christmas joy you bring,
But what it is, though all so new, to fill your heart,
Like no three words could ever do.
Of my heart, of my heart.
Posted by Nay Nay Naing at 6/10/2006 01:07:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/09/2006 03:58:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/09/2006 11:57:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/06/2006 03:21:00 PM0comments
Turn up the volume of your speakers and enjoy the movie at
May you be blessed for always...
Posted by Nay Nay Naing at 6/06/2006 02:04:00 AM0comments
ဘာတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေသေးသလဲ
Posted by Nay Nay Naing at 6/04/2006 09:36:00 PM0comments
Album :Two Plus
Song : သိတ်ချစ်တယ်
Posted by Nay Nay Naing at 6/03/2006 07:18:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/03/2006 06:45:00 PM0comments
ပါပီလွန် ...ဘာသာပြန်သူ.. လေသူရဲတစ်ဦး
ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမည့်သူ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့်မှာ သတ္တွိရှိသူ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့် ဘဝကို ရောက်ရာဘဝ၌ လောကဓံကို ကြံ့ကံ့ခံပြီး ရှင်သန်အောင် ရုန်းမည့်သူဖြစ်၏။
ကျွန်တော့် ဘဝကိုအသေမခံပါ။ ရုန်းမည် တိုက်မည်။
ကျွန်တော့်အရှေ့ မှာ အခက်အခဲပြဿနာ ဒုက္ခဆင်းရဲ အားလုံးကို ရုန်းမည်တိုက်မည်။
မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်များကိုတော့ ဘယ်တော့မှ အပျောက်မခံ။
နေ့ စဉ်မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့် ဘဝကို အမြဲ စ နေမည့်သူဖြစ်၏။
မနက်ဖြန်၌ပင် ဘဝသစ်တစ်ခုကို မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့် ပြန် စ ဦမည်။
Labels: Book, Notes
Posted by Nay Nay Naing at 6/03/2006 03:49:00 PM0comments
Speech given at the Lord Mayor's Luncheon, Mansion House, London, November 10, 1942
Posted by Nay Nay Naing at 6/03/2006 09:32:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/02/2006 07:31:00 AM0comments
Will write later... :D
Posted by Nay Nay Naing at 6/01/2006 12:32:00 PM 1 comments